Shandisa Pyridoxal hydrochloride powder (65-22-5) hplc = 98% | AASraw
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva pa gramu kusvika kuhutano hwePyridoxal hydrochloride powder (65-22-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Pyridoxine HCl powder ndiyo hydrochloride munyu weVitamin B6. Apo rinoshandiswa zvakasununguka mumuviri, Pyridoxine inobatsira mukuenzanisa kweyerodi uye potasium pamwe nekusimudzira kushamba kwemasero matsvuku eropa. Iyo inofungidzirwawo kuti inodzivisa kukanganisa, eczema, uye psoriasis, maererano ne Wikipedia.
Melt Point: 159 kusvika 162 ° C
Color: Yakachena kana kuti inopera Muchena Crystalline
ZVACHITIKA (S): Pyridoxal hydrochloride
Kunze kwekuti iwe uri kutora mishonga inoparadza mavhitamini B6 uye haibvumiri mamwe mavitamini B (zvakadai sepenicillamine kana Isoniazid), unofanira kutora "B full". Izvozvo ndechokuti B mavitamini anobata pamwe chete. Heano mimwe mienzaniso:
Mumuviri wako unogona kubhadhara kushayikwa kwekoini ne pyridoxine.
Murairo we homocysteine, chinhu chinoputira chinokonzerwa nechirwere chemwoyo neAlzheimer's, chinoenderana nechechi pyridoxine (B6), niacin (B3), uye cobalamine (B12).
Vanhu vane zvikamu zvakaderera zveB6 vari pangozi yakawanda yehutano hwemwoyo, asi zviyero zvehutachiona hazviendi kunze kunze kwekunge vagamuchira zvose B6 ne folic acid.
Ndeipi iyo miyo yePyridoxal hydrochloride
Izvo zvishoma B6 inofanirwa kudzivisa kushaikwa ndeye 1.7 milligrams pazuva pavakuru. Iwe unogona kuwana izvozvo kubva pamaturo matatu ezviyo zvakasimbiswa uye / kana chingwa chichena.
Zvisinei, kuti uwane mavitamini B6 akawanda kubva pane zvokudya zvisina kusimbiswa, iwe unoda kudya:
10 oz (280 gramu) yekudya-chiedza chekudya (yakabikwa), kana
11 oz (308 gramu) yeasimoni yakagadzirwa, kana
4 bhanana, kana
2-1 / 2 yakabika mbatata, neganda, kana
1 pound yepinashi yakasvibiswa
Sezvo vanhu vakawanda vachidya zviyo zvakawanda zvakagadzirwa zvakagadzirwa nechingwa, vitamini B6 inoshaya haisi-kunze kwekuti iwe uri kuita chinhu chakanaka nekudya zvose-chaiwo!
Iyo Pyridoxal hydrochloride inoshanda sei
Pyridoxine HCl ndiyo hydrochloride munyu weVitamin B6. Apo rinoshandiswa zvakasununguka mumuviri, Pyridoxine inobatsira mukuenzanisa kweyerodi uye potassium pamwe nekusimudzira kushamba kwemasero matsvuku eropa. Iyo inofungidzirwawo kuti inodzivisa kukanganisa, eczema, uye psoriasis, maererano ne Wikipedia. Inofungidzirwawo kuti ine anti-bhakitiriya uye antioxidant iyo inoshandiswa pamusoro peganda, kunyange zvazvo pane zvishoma zvitsvakurudzo zvekuongorora zvirevo izvi (CosmeticsCop.com). Kunyange zvazvo Vitamin B6 pachayo isinganzwisisi zvakanakira kugadzirwa kweganda kana inoshandiswa pamusoro wepamusoro, kushayikwa kunogona kutungamirira kumatambudziko eganda, kusanganisira kubata dermatitis, kutsamwa, eczema, uye kubvongodza (iHealthDirectory.com).
Vitamini B6 inogona kuwanikwa muzvirimwa, mbeu, mazai, zvigadzirwa zvezuva nezuva, mazai, hove, nyama neupfu, asi Pyridoxine inongowanikwa zvakasikwa muzvibereko zvishomanana, kusanganisira dragon chibereko kubva kuSouth East Asia. Muzvipfeko uye mishonga yekuchengetedza iwe pachako, Pyridoxine inoshandiswa seganda uye mvere dzemuviri, uye inowanika mune zvakasiyana-siyana zvemafuta, kusanganisira mabhizimisi, mabhodhoro uye zvinogadzirisa, zvinhu zvinoshenesa, mishonga yekuchengetedza mvere, nekuchengetwa kweganda.
Kubatsira kwePyridoxal hydrochloride
Sezvaunogona kuwana pane imwe nzvimbo panzvimbo ino, B6 supplementation inogona kubatsira mune acne / rosacea, autism, kucherechedza dambudziko uye kusaona zvakanyanya-hyperactivity disorder (ADHD), rheumatoid arthritis, kuora mwoyo, kuora mwoyo, high homocysteine, chirwere chemwoyo, , kuora mwoyo kwemazuva, kurwara kwemangwanani, kuora mwoyo kunobatanidza nekudzivirira, kuora mwoyo kunobatanidza nemuromo wekudzivirira kubata pamuviri, premenstrual syndrome uye premenstrual dysphoric disorder, zviratidzo zvekumuka kwemurume, kukanganisa kwemazera ane makore uye kukanganwa kwepfungwa kusingakonzerwi neAlzheimer's, musana, conjunctivitis, zvipembenene zvinoputika, kukwirira kweropa, kuchengetedza mvura, chirwere cheshuga chepfungwa, chirwere chemahara, carpal tunnel syndrome, zvinokonzera maronda (aphthous ulcers), marudzi mazhinji echichichiphrenia, vertigo, uye overweight.
Pyridoxal hydrochloride muchidimbu
Chii chinonzi pyridoxine hydrochloride? Pyridoxine ndiyo maitiro e vitamin B6 yakaitwa nemiti, kunyanya muvirongwa wegorosi, mupunga, uye chibage. Pyridoxine hydrochloride, inozivikanwawo se pyridoxine HCl, yakaoma, yakachena iyo inogona kushandiswa kuita vitamini B inowedzera iyo inopedzisira yakanyanya nguva yakareba seunenge wakaichengeta pavharafu.
Munenge wose munhu wose anowana B6 yakakwana kuti arege kushayikwa zviratidzo zvakadai semiromo yakatsvaira, maziso emafudzi, uye kurara, asi haasi munhu wese anowana vitamini B6 yakakwana yekugadzirisa zvakakwana zvirwere. Hezvino zvinhu zvitatu zvose zvinoda kuziva nezve pyridoxine hydrochloride inoshandiswa muzvigadziridzo kurwisa zvirwere uye kuchengeta iwe utano.
Nzira yekutenga Pyridoxal hydrochloride kubva kuAASraw